Eeritiraa - Wikipedia
(Redirected from Ertiraa)
دولة إرتريا (Dawlat Irītriyā)
Ballina 117 600 km²
Baayyina ummataa 5 869 869 (2016)
Tuuta'insa ummataa 51,8/km²
Faaruu Ertra, Ertra, Ertra
Koodii lakkoofsa bilbilaa +291
Eeritiraan biyya Gaanfa Afrikaa keessatti argamtu. Eeritiraan naannoo Galaana Diimaatti argamti.
Eeritiraa n biyya baha Afrikaatti argamtu yoo tattu dhihaan Sudaaniin, kibbaan Itoophiyaan, kibba-bahaan Jibuutin dangeffamte argamtii. Bahaa fi kabba-bahaan Galaana Diimaan kan marfamte yoo taatu, Galaana Diimaa gama immo Sa'ud Arabiyaa fi Yamanitu argama. Odoloonni Dahilaak fi Odolli Hanish bayyen akka kutaa Eertiratti ilaallamu.
Mudde 1, 1890tti, Eertiraan bittaa gabrummaa (colony) Ixaaliyaa jala galte. Eertiraan ammaa kuni billisumma Itoophiyaarra kan argatte warrana wagga sodammaffi geggeffameen booda. Warranni kunis bara 1961 hanga 1991 geggeeffame. Heerri Eertiraa bara 1997tti ba'e akka ibsetti, Eertiraan riippabiliika pirezidaantin bultu (presidential republic) yoo taatu dimookiraasii paarlaamaa (Unicameral Parliamentary Democracy) qabdi. Haa ta'u malee sababa warrani Itoophiyaa fi Eertiraa jiddutti Caamsaa 1998 jalqabbeffi, Eeritraan seera kana hojji irra olchuu hin dandenye.
Eertiraan biyya afaan fi adaa adda adda qabdu fi gosa amantii lamma qabdi, kunis amantii Islaamaa Sunnii fi amantii Ortodoksii kan bahaa (Oriental Orthodox Christianity) ti. Ertiraa keessatti gosa sagalitti argamu. Eritraan afaan biyyaffi murteeffame hin qabdu, haa ta'u malee biyya keessatti afaani gosa sadiin hojjattu; kunis Tigriffa, Arabiffa fi Ixaaliyaaniffa dha.
Retrieved from "https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Eeritiraa&oldid=30280"
This page was last edited on 26 Amajjii 2018, at 00:55.